ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်းသံမဏိထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံစျေးနှုန်းများဖိုး - တရုတ် Qingdao Xinmao ZT သံမဏိ
သံမဏိကိုယ်ထည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင်အဓိကကျသောတည်ဆောက်ပုံ (သံမဏိရောင်ခြည် / အမိုး၊ သံမဏိတိုင် / တိုင်)၊ ဒုတိယတည်ဆောက်မှု (ခေါင်မိုးနှင့်နံရံပြူ၊ သံမဏိသတ္တုကိုယ်ထည်၊ လည်စည်း - ဘား)၊ တံခါးနှင့်ပြတင်းပေါက်များနှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။
Inidustry: Wokeshop, ဂိုဒေါင်နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းစက်ရုံများ။
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း: Mall, ဟိုတယ်, ပြပွဲခန်းမ, ရုံးအဆောက်အဦ။
ပြည်သူ့: ကျောင်း, စာကြည့်တိုက်, အားကစားကွင်း, churce, etc
၁။ Prefab ricated ။ မြန်ဆန်လွယ်ကူသောတပ်ဆင်မှု၊
၂။ သုံးစွဲသူစိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်း အမျိုးမျိုးသော layout ကို, လှပသောပွဲ, နံရံနှင့်အမိုးများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များ
၃ ။ ပေါ့ပါးခြင်း, လွယ်ကူသောအပြောင်းအရွေ့များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ချွေတာ,
၄ ။ ဖြုတ်တပ်onvenient စုဝေးသို့မဟုတ် disassemble ရန်။ အစာရှောင်ခြင်းဆောက်လုပ်ရေးနှင့်လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခ
၅။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်, recycle မရှိစွန့်ပစ်ထုတ်လုပ်
၆။ မြင့်မားသောခွန်အား၊ လုပ်နိုင်တဲ့ခုခံတန်း 8 မြေငလျင်
ရေ၊ မီး၊ လေပြင်းနှင့်ဆီးနှင်းများကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်သည်။
၇ ။ အသက်ရှည် နှစ် ၅၀ ကျော်ကြာအသုံးပြုနိုင်သည်။
၈။ ကျယ်ပြန့်သောသက်တမ်း တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအကွာအဝေးများသည်အလယ်အကွက်များမရှိဘဲ ၃၆ မီတာအမြင့်ဆုံးအကွာအဝေးရှိနိုင်သည်။
၁) အရွယ်အစား - MOQ သည် ၁၀၀ m2၊ အကျယ် X အရှည် X eave အမြင့်၊ အမိုးစောင်း
၂။ အမျိုးအစား - တစ်ခုတည်းသောဆင်ခြေလျှော၊ တစ် ဦး တည်း span, နှစ် span, Multi-span, တစ်ထပ်, နှစ်ထပ်။
၃) အခြေစိုက်စခန်း - ဘိလပ်မြေနှင့်သံမဏိအခြေခံအုတ်မြစ်များ
4) ကော်လံနှင့်ရောင်ခြည် - ပစ္စည်း Q345 (S355JR) သို့မဟုတ် Q235 (S235JR) သံမဏိ၊ အားလုံးသော့ခတ်ဆက်သွယ်မှု! ဖြောင့် Cross- အပိုင်းသို့မဟုတ် Variable Cross-section!
၅။ Bracing - X-type သို့မဟုတ် V-type သို့မဟုတ်ထောင့်၊ အဝိုင်း၊ စသည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအခြားအမျိုးအစားများ
6) ကို C သို့မဟုတ် z purlin: C120 ~ C320, Z100 ~ Z200 ကနေအရွယ်အစား
၇။ အမိုးနှင့်နံရံမျက်နှာပြင် - တစ်ခုတည်းသောအရောင်အသွေးစုံသည့်သံမဏိပြားများ ၀.၃၂၆ ~ ၀.၈ မီလီမီတာ၊ (အကျယ် ၁၁၅၀ မီလီမီတာ) သို့မဟုတ် EPS, ROCK WOOL, PU စသည့်အသားညှပ်ပေါင်မုန့် ၅၀ မီလီမီတာမှ ၁၀၀ မီလီမီတာ၊
၈။ Surface - သံချေးဆေးဆေးနှစ်ချပ်ပါရှိသည်။
သငျသညျအကြှနျုပျတို့သညျအဘို့ဒီဇိုင်းလိုအပ်ခဲ့လျှင်, pls ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ပါ parameter သည်ထောက်ပံ့
အရွယ်အစား: အကျယ် X အရှည် X ကို eave အမြင့်, ခေါင်မိုးစောင်း
၁။ ခေါင်မိုးပေါ်ရှိတိုက်ရိုက်ဝန် (KN / M2) လေတိုက်နှုန်း (KM / H)
၂။ အဆောက်အ ဦး ၏တည်ဆောက်ပုံ၊ အတွင်းပိုင်းကိရိယာ
3) function ကိုအပေါ်အထူးလိုအပ်ချက်
၄။ ငလျင်လှုပ်လျှင်။ နှင်းခဲ (KG / M2)
၆။ Crane (ရှိပါက)၊ Crane span၊ crane lift အမြင့်၊ max lift capacity, ဘီးအများဆုံးနှင့်ဖိအား min!
၁။ ကုန်ကြမ်းများကိုပြင်ဆင်ပါ။ ဖြတ်ထားသောသံမဏိပြားသို့မဟုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရွယ်အစား H အပိုင်းသံမဏိနှင့်ထောင့်သံမဏိ၊ ပတ် ၀ န်းကျင်၊
၂။ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဂဟေဆော်ခြင်း - ကျွန်ုပ်တို့၏ဂဟေဆော်သူများသည်သံမဏိကိုယ်ထည်များကိုစုစည်းရန်ပုံဆွဲချက်များအတိုင်းလိုက်နာ။ တူညီသောရောင်ခြည်၊ ကော်လံ / သတ္တုအထိမ်းအချုပ်အနေဖြင့်ထားရှိရမည်။ (ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးစစ်ဆေးသူသည်သံမဏိအပိုင်းအစများကိုစစ်ဆေးပြီးသွားသည်။ ဤသည်မှာပထမအကြိမ်ဖြစ်သည်။ )
၄ ။ ဆေးသုတ်ခြင်း - သဲပေါက်ကွဲမှုပြီးနောက် ၂ နာရီအတွင်းသံမဏိပစ္စည်းအားလုံးသည်ဆေးသုတ်သင့်သည်။ ဖောက်သည်သည်မည်သည့်အရောင်နှင့်မည်သည့်တံဆိပ်မဆိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ (တတိယအရည်အသွေးစစ်ဆေးမှု)
၅။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုဖောက်သည်အားစစ်ဆေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ကြံခြင်းလုပ်ငန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပြီးဆုံးသွားသောအခါသံမဏိဘောင်ကိုမထုပ်မီကုန်ပစ္စည်းများကိုစစ်ဆေးရန်ဖောက်သည်များကိုဖိတ်ပါမည်။
၆။ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်တင်ခြင်း။ အကယ်၍ ဖောက်သည်များကကုန်ပစ္စည်းများကိုအနီးကပ်ကွန်တိန်နာများဖြင့်သယ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလိုအပ်ပါကသံမဏိမြင်းပေါ်၌သံမဏိကိုယ်ထည်ကိုတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးထုပ်ပြီးသံမဏိအထုပ်တစ်ခုလုံးကိုကောင်းစွာချည်နှောင်ရမည်။ ( စတုတ္ထအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း)
ထုပ်ပိုးခြင်း - ၄၀ ′OT သို့မဟုတ်ပင်မအတွင်းထုပ်ပိုးစရာမလိုဘဲပင်မသံမဏိဘောင်၊ ၄၀′ ပင်မ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်အမိုးနှင့်နံရံမျက်နှာပြင်ပေါ်တင်ခြင်း။ ဒါမှမဟုတ်ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရ။
installation service ကို
လိုအပ်မယ်ဆိုရင် * Layout အစီအစဉ်ကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲနိုင်ပါသည်။
1. 2003 နှစ်တွင်တည်ထောင်အမျိုးမျိုးသောကြိုတင်အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများ၊ ကွန်တိန်နာအိမ်များနှင့်သံမဏိကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ခြင်းများတွင်ကျွမ်းကျင်သည်။
၂။ R&D ၀ န်ထမ်း ၅၀ ကျော်နှင့် 400 ကျော်အလုပျသမား
၃ ။ 35, 000 စတုရန်း maters စက်ရုံ, အပြည့်အဝလိုင်းထုတ်လုပ်မှု
၄။ အရည်အချင်း - CE (DIN18800), ISO9001, BV, SGS; (CSA, AS / NZS, UL စသည်)
၅။ ဆောက်လုပ်ရေးမြင့်မား ပို့ဆောင်မှုအချိန် 20 မှ 30 ရက်အတွင်းဖွစျလိမျ့မညျ
က။ သင်မည်သည့်ကုမ္ပဏီအမျိုးအစား၊ စက်ရုံ၊
ကျွန်ုပ်တို့သည် Dezhou China တွင်တည်ရှိသောသံမဏိဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများဖြစ်ပါသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအတွက်ပိုမိုအဆင်ပြေစေပြီးကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုအတွက်လည်းအဆင်ပြေသော Qingdao တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရုံးခန်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နွေးထွေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်နာမည်ကောင်းရရှိခဲ့သည်။ ရေရှည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု၊ စျေးနှုန်း၊ ထုပ်ပိုးခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်းအချိန်စသည်တို့အပေါ်အခြေခံသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသောကြောင့်ဖြစ်သည်
ခ။ သင့်ကုမ္ပဏီသည်စက်ရုံလား၊ ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်ရုံများဖြစ်သောကြောင့်သင်သည်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းကိုခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည်squareရိယာ ၅၂၀၀၀ စတုရန်းမီတာရှိသည်။
ဟုတ်တယ်၊ ကျွန်တော်တို့မှာဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာ ၁၀၀ ကျော်ရှိတယ်။ သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အဝဖြေရှင်းချက်ပုံဆွဲခြင်းများကိုဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။ သူတို့က software ကိုအသုံးပြုသည်။ Auto CAD, PKPM, MTS, 3D3S, Tarch, Tekla Structures (Xsteel) V12.0.etc
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်တပ်ဆင်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်သင်တန်းပေးခြင်းကိုအပိုဖြင့်ပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သောနည်းပညာအင်ဂျင်နီယာကိုပြည်ပတွင်တပ်ဆင်ခြင်းကိုကြီးကြပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်လမ်းညွှန်တပ်ဆင်သည့်အဖွဲ့ရှိသည်။ လူ ၃၀ ကျော်ပါ ၀ င်သည်။
သူတို့ဟာအီရတ်၊ ဒူဘိုင်း၊ တောင်အာဖရိက၊ အယ်လ်ဂျီးရီးယား၊ ဂါနာ၊ ဂါဘွန်း၊ တာဂျစ်ကစ္စတန်၊ ဘာကီနာဖာဆို၊ ပနားမား၊
Qingdao Xinmao ZT သံမဏိဆောက်လုပ်ရေး Co. , Ltd
Add: Room 201, Building 32, Tian'an Cyber ​​Park, Chengyang, Qingdao, China
ယခင်: တရုတ်ထံမှသံမဏိဖွဲ့စည်းပုံအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏ Professional ကထုတ်လုပ်သူ
နောက်တစ်ခု: အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး Prefab စက်မှုဖွဲ့စည်းပုံသံမဏိဂိုဒေါင်ထုတ်လုပ်သူ
Prefab သံမဏိအဆောက်အ ဦး ဂိုဒေါင်
သံမဏိ Frame က Multi ပုံပြင်များအဆောက်အအုံ